भूकम्पपीडित वृद्धा र पुरुषलाई राहतमा स्यानेटरी प्याड ! - Enepalese.com
भूकम्पपीडित वृद्धा र पुरुषलाई राहतमा स्यानेटरी प्याड !
इनेप्लिज २०७२ साउन २० गते १४:३२ मा प्रकाशित
भक्तपुर, २० साउन । राहतमा चामलको आशा गरेर शिविरमा बसेका भक्तपुरका ज्येष्ठ नागरिक र पुरुष भूकम्पपीडितलाई दाताले महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने स्यानेटरी प्याड बाँडेपछि टोक्नु न बोक्नु भएको छ ।
शिविरमा रहेकी ७८ वर्षकी शान्ता श्रेष्ठले राहतका नाममा आउने यस्ता सामानको सट्टा खानेकुरा र लाउने कुरा ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो भन्नुभयो ।
श्रेष्ठले भन्नुभयो– “हामीलाई राहत सामग्रीमा आउने यस्ता सामान के काम ? बरु पछ्यौरा, ओढ्ने, ओछ्याउने र खानेकुरा ल्याइदिए सजिलो हुन्थ्यो ।”
शिविरमै रहेकी ७० वर्षकी विष्णुदेवी व्याञ्जुले शिविरमा खानेकुरा ल्याइदिए प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“मनमा धेरै पीर छ, खुसी कतै छैन, दिनभरि शिविरमा बस्दा के खाउँ के खाउँ लाग्छ, बरु खानेकुरा ल्याएदिए खान पाइन्थ्यो ।”
शिविरमा बस्दै आएकी ६७ वर्षकी पदमसुन्दरी बाटीको गुनासो पनि उस्तै छ । जस्ताको शिविरमा छानो प्वाल परेकाले राति चिसो भएर जाडो हुने बताउँदै उहाँले बरु जाडोमा ओढ्ने सामान दिएको भए प्रयोग हुनेथियो भन्नुभयो ।
शिविरमा बाँडेको राहत सामानमा खानेकुरा नभएको गुनासो गर्र्दै ७० वर्षकी दीपमाया टुकबन्जाले स्यानेटरी प्याडको सट्टामा पाउरोटी दिएको भए उपयुक्त हुने बताउनुभयो । सत्तरी वर्षकै जगतमाया पक्काले पछिल्लो समयमा राहत बाड्नेले खानेकुरा नदिई अनावश्यक सामान दिँदा राहतको आशै मर्न थालेको दुखेसो गर्नुभयो ।